Inkambu Yothando | Entprima Umculo nokuningi
Entprima Isiqophi imidlalo
Hlonipha uhlu lwadlalwayo
Uhlu lwadlalwayo lokuchuma
Uhlu lwadlalwayo lweSerenity
Okuthunyelwe Kwezindaba Zokuxhumana
Inethiwekhi Yomhlaba Yokunakekelwa
Ukusuka ku-Ape kuya Kumuntu
Entprima Jazz Cosmonauts - Ukukhululwa Amanothi, Khipha Amanothi
"Inkambu Yothando" isebenzisa ngendlela engajwayelekile ifomu lokuphindaphinda nelokuphamba. Ezindimeni ezimbili zokufunda, okushiwo nguJohann Sebastian Bach ovela eSt Matthew Passion kucashunwe ezingxenyeni ezilandelayo. Ingoma ingokomoya ngendlela ethile ngoba kuchazwa ithemba lezinto ezingacatshangwa ngokwesayensi. Okushiwo, kodwa-ke, kunalokho kungumbono wethemba njengophikisana nokuphelelwa yithemba ekuhlukunyezweni kwezingane. Ukuhlukunyezwa kwezingane kuyicala elibi kubantu. Noma ngabe ukuhlukumeza ngokocansi, ukusetshenziswa kwamasosha ezingane noma olunye unya lwengqondo, asikho isizathu salokho. Sisele nethemba elimnandi lokuthi uthando ekugcineni luzowina umjaho.
Ikhasi lasekhaya lomculi
Woza, undizele ngaphakathi uzwe leyo nsimu yothando
Ku-odyssey yethu esikhaleni, sifike enkambeni ekhangayo ethatha yonke inkambu yokubuka
Kubonakala sengathi ayikho indlela ezungezile futhi besaba kakhulu
Lapho sisondela, sasiwezwa amazwi ezingane ecula ngokungaphezi.
Ngena, ngeke sikulimaze
Lapha kuhlala imiphefumulo yezingane ezihlukunyeziwe ezazingafuni lutho ngaphandle kothando
Uma ufisa okuthile ngentshiseko kangaka, kwenzeka
Le yinkambu yothando
Ngemuva kwendaba ye- “Spaceship Entprima”Nomdlalo wasesteji othi“ From Ape to Human ”, the Entprima Jazz Cosmonauts babekhululekile ukwenza umsebenzi omusha. Isinqumo senzelwa umsebenzi waphakade, wezenhlalo nezepolitiki - ukulwela ukuzwelana okwengeziwe kulo mhlaba.
Uzwela alufaki ubandlululo, ubuhlanga, ukungabi nabulungisa, ukuhaha kanye nabo bonke ububi bokuziphatha komuntu. Futhi uma sikhuluma ngokulwa, sifaka ukumelana nokuzimisela. Ngeke sishiya izingane zethu izwe okufanele ziphile ngazo uma sizivumela ukuba siguqulwe unomphela ekuguqukeni kothando noma ekubuyekeni nokuzindla.
Noma kunjalo, wonke umuntu udinga ibhalansi yomphefumlo wakhe. Uma siphendula inzondo ngenzondo, siyohluleka kabi. Kepha sibaningi! Uma wonke umuntu enza ingxenye yakhe empilweni yansuku zonke ukwenza ngcono lesi simo, sizonqoba.
Qiniseka ukuthi uhlala unamandla ku-mission yakho futhi ugweme izingxabano ezilimaza umphefumulo wakho.
Okunye okutholakala ku:
7Digital ♦ ACRCloud ♦ Alibaba ♦ AMI Entertainment ♦ Anghami ♦ Audible Magic ♦ Audiomack ♦ Boomplay ♦ Claro ♦ ClicknClear ♦ d'Music ♦ Express In Music ♦ Facebook ♦ Huawei ♦ iHeartRadio ♦ IMSTREAM ♦ iTunes ♦ Jaxsta ♦ JioSaavn ♦ JioSaavn (K Digital Media), KK Box, LINE Music, LiveXLive, Medianet, Mixcloud, MonkingMe, Imibiko Yomculo ♦ MusicTime! ♦ I-NetEase ♦ Pandora ♦ Pretzel ♦ Qobuz ♦ Resso ♦ SBER ZVUK ♦ Sirius XM ♦ Tencent ♦ TikTok ♦ TouchTunes ♦ Yandex ♦ YouSee / Telmore Musik
Umbono wenkambu ye-cosmic eyenziwe wukulangazelela uthando lwemiphefumulo yezingane ezihlukumezekile yaqala ngonyaka we-1997 futhi iyingxenye yendaba ye-CD yokugcina ethi "Alltage" ngumculi wezwi nomshayi wangaphambili wecilongo uHorst Grabosch.
Ku-odyssey emkhathini, osomkhathi bafika kule nsimu engenakudlulwa. Ukuphoqeleka ukundiza kule nsimu yisici esinqumayo ebuhleni bendawo. Ishintsha izimpilo! Uzwela luyashintsha kusuka kokukhethwa kukho kuye engxenyeni engenakugwemeka yokuba ngumuntu.
Kodwa njengoba izwi lengane lisho, “Akudingeki wesabe, ngeke sikulimaze!” Kuyisihlengo, ngakho-ke isisusa somoya. Ngeshwa, ukuhlukunyezwa kwanoma yiluphi uhlobo sekuyingxenye cishe yazo zonke izinkolo, ngakho-ke ukukubiza ngokuthi isisusa senkolo akunangqondo.
Vele, akusikho ukuqondana nje ukuthi le ngoma ivele ngaphambi nje kwePhasika, futhi futhi akuyona into engaqondakali ukuthi kucashunwe inkulumo evela kuBach's St Matthew Passion. Kuyinto engafani neze ukuthi le ngoma iza ngomongo womculo we-pop wanamuhla.
Esikhathini lapho ukupenda okumnyama nokumhlophe sekuba semfashinini futhi, kubalulekile ukuthi abantu bafunde ukubekezelela ukuphikisana okubonakalayo futhi. Labo abalalela ngokucophelela, nokho, bazobona ukuthi ukuphikisana kudalwa kuphela ngamaphethini ethu emakhanda ethu, enza impilo ibe mpofu kakhulu kunalokho ebingaba yikho.
I-Euphoricplus Audiofile Corona 2021
Ingoma ichaza ukuqubuka kwesasasa lentsha ngenkululeko yeqembu esanda kuwina ngemuva kokugonywa.
IHappyplus Audiofile Rastafari 1971
Le ngoma ikhumbuza isikhathi esihle se-reggae noBob Marley, kanye nenkolo yamaRasta, eyasungulwa ekuqaleni kuka-1930, kodwa yaziwa umhlaba wonke ngoBob Marley no-reggae.
I-Emotionplus Audiofile X-mas 1960
Lapho uKhisimusi ususondele, izinkumbulo, imizwa kanye nombono obucayi wezenzakalo zomhlaba kwesinye isikhathi zakha umfelandawonye wasendle.
Hlala uxhumekile nathi futhi ubhalisele incwadi yethu yezindaba. Umjikelezo wethu wezindaba uphakathi futhi awuhlukumezi.
Ngiyabonga futhi Siyakwamukela!
Ngiyavuma ukuthola Entprima iphephandaba eliphathelene "Entprima - Umculo nokuningi "cishe njalo ngenyanga. Ngingahoxisa imvume yami nganoma yisiphi isikhathi mahhala nganoma isiphi isikhathi nge-imeyili engiyitholayo. Uzothola imininingwane eningiliziwe yokuthi siyiphatha kanjani idatha yakho kanye nesoftware yezindaba ethi SendInBlue esetshenzisiwe Ngathi kithi Inqubomgomo yobumfihlo
Sisebenzisa amakhukhi kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zazo zibalulekile, kanti ezinye zisisiza ukuthuthukisa le webhusayithi kanye nesipiliyoni sakho.
Izintandokazi Zobumfihlo Zomuntu ngamunye
Imininingwane yekhukhi Inqubomgomo yobumfihlo Imprint
Lapha uzothola umbono wawo wonke amakhukhi asetshenzisiwe. Unganikeza imvume yakho ezigabeni zonke noma ubonise eminye imininingwane bese ukhetha amakhukhi athile.
Vuma konke Londoloza
Amakhukhi abalulekile anika amandla imisebenzi eyisisekelo futhi ayadingeka ekusebenzeni kahle kwewebhusayithi.
Khombisa Imininingwane yekhukhi Fihla Imininingwane Yekhukhi
Umnikazi wale webhusayithi
Igcina izintandokazi zabavakashi ezikhethwe kwi-Cookie Box of Borlabs Cookie.
Ukuphelelwa yisikhathi kukhukhi
Izibalo amakhukhi aqoqa imininingwane ngokungaziwa. Lolu lwazi lusisiza ukuba siqonde ukuthi izivakashi zethu zisebenzisa kanjani iwebhusayithi yethu.
Ikhukhi le-Google elisetshenziselwa izibalo zewebhusayithi. Idala imininingwane yezibalo yokuthi isivakashi siyisebenzisa kanjani iwebhusayithi.
I-Facebook Ireland Limited
Ikhukhi ye-Facebook esetshenziselwa ama-analytics wewebhusayithi, ukukhomba isikhangiso, kanye nesilinganiso sesikhangiso.
Iseshini / Unyaka o-1
Okuqukethwe kusuka kumapulatifomu evidiyo kanye nezinkundla zokuxhumana kuvinjelwe ngokuzenzakalelayo. Uma amakhukhi Emidiya Yangaphandle amukelwa, ukufinyelela kulokho okuqukethwe akusadingi imvume ebhukwayo.
Isetshenziselwe ukuvulela okuqukethwe ku-Facebook.
Kusetshenziselwe ukuvulela okuqukethwe kwe-Google Amamephu.
Isetshenziselwe ukuvulela okuqukethwe kwe-Instagram.
Kusetshenziselwe ukuvulela okuqukethwe kwe-OpenStreetMap.
Isetshenziselwe ukuvulela okuqukethwe ku-Twitter.
__izinto zokubekelwa phansi, ezokugcina_ezindawo_ezasendaweni_etest
Kusetshenziselwa ukuvimba okuqukethwe kwe-Vimeo.
Kusetshenziselwe ukuvimba okuqukethwe kwe-YouTube.
inikwe amandla yiBorlabs Cookie
Inqubomgomo yobumfihlo Imprint